म ज्ञानेन्द्रको कमारो होर ?भन्दै खनिए कमल थापा, राजसंस्थाको एजेण्डा छोडेर देशव्यापी अभियान चलाउँने घोषणा
राप्रपाको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देन सँग नमिठो पराजय खाएर मुर्छित भएर बसेका कमल थापाले पूर्वराजा ज्ञानेद्र शाह माथी कठोर टिप्पणी गरेका छन् ।
राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष थापाले आफु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कमारो र दास नभएको भन्दै उनले जे जसो भन्छन् त्यसलाई हस भनेर जान नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
आफुलाई निर्मल निवासको नांंगो हस्तक्षेप गरेर अध्यक्षमा पराजित गराईएको दाबी गर्दै आएका थापाले पूर्व राजा माथी झन कडा प्रहार गर्न थालेको छन् ।
एक टेलिभिजन अन्तर्वाताका क्रममा के म पूर्वराजाको कमारो र दास होर ? भन्दै उनी खनिएका छन् । पूर्वराजाले चाहे अनुसार कमल थापा नचल्ने निष्कर्ष निकालिएर नै आफुलाई षड्यन्त्र गरेर हराईएको दावी पनी उनले गरेका छन् ।
अब राजसंस्थाको एजेण्डा बोकेर हिड्ने की नहिड्ने भनेर गम्भिर अवस्थामा आफु पुगेको उनले बताएका छन् । जसका लागी मैलै जीवनको कुर्वानी गरेको छु आज उनैलाई मेरो विश्वास छैन भने म किन उनको एजेण्डा बोकेर हिँडु ? उनले प्रश्न गरेका छन् ।
थापाले अब आफुले राजसंस्थाको एजेण्डा छोड्ने संकेत पनि दिएका छन् । छिट्टैनै आफ्नो एजेण्डा लिएर देशव्यापी अभियान चलाउँने घोषणा उनले गरेका छन् ।
राप्रपाको महाधिवेशनमा निर्मल निवास बाट भएको नांगो हस्तक्षेपको प्रमाण आफु सँग सुरक्षित भएको दावी पनि थापाले गरेका छन् । पार्टीमा यस विषयमा छानविन गर्नका लागी आफुले लिखित रुपमा माग गरेको भन्दै थापाले आवश्यक परेका बेलामा प्रमाण पेश गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन् ।
रेकर्ड सहितको प्रमाण आफु सँग भएको दावी उनले गरेका छन् । निर्मल निवासले गरेको हस्तक्षेपका बारेमा राप्रपाले छानवीन गरेर भत्सना नगर्ने हो भने आफु सो पार्टी बाट अलग हुने घोषणा पनि थापाले गरेका छन् ।
यो बिषयमा छानविन नभए सम्म पार्टी कार्यालय पनि नजाने पनि थापाले बताएका छन् । छानविन नभएमा आफुले राजसंस्थाको एजेण्डानै परित्याग गर्ने उनले बताएका छन् ।
कतिपय मान्छेहरुले कमल थापाले राजा माथी अली कडा ढंगले प्रहार गर्यो भन्छन्, मलाई मेरो राजनितीनै सिध्याउँने गरि पछाडी बाट छु रा रोपिएको छ अनी मैले ऐया पनि भन्न नपाउँनु? थापाले प्रश्न गरेका छन् ।
कार्तिक महिनामा मात्रै पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बोलाएर चाँदीको थालमा खाना खुवाएको पनि उनले खुलासा गरेका छन् । कार्तिकमा बोलाएर चाँदीको थालमा खाना खुवाउँने एक महिना नवित्दै यत्रो षड्यन्त्र ? भन्दै थापा खनिएका छन् ।
राप्रपालाई ज्ञानेन्द्रले भजनमण्डली बनाउँन खोजेको भन्दै राजेन्द्र लिङ्देन लाई हति यार मात्रै बनाएको जिकिर उनले गरेका छन् । आफुले लिङ्देन सँग होइन निर्मल निवास सँग प्रतिष्पर्धा गरेर पराजित भएको थापाले भनेका छन् ।